09 / 02 / 2019 | RayHaber
Andro: 9 Febroary 2019
Ny tetikasan'ny fiara fitaterana herinaratra azo tanterahina ao Manisa Metropolitan ao amin'ny Izmir Street eo anelanelan'ny Moskoa Sheikh Fenari sy Cumhuriyet Primary School amin'ny sary hoso-doko. Metropolitan Munisipaly momba ny raharaha natao [More ...]
Ny Eurasia Rail 10-12 dia ho tonga amin'ny hetsika amin'ny April 2019
Eurasia Rail, izay fantatra fa iray amin'ireo foibe lehibe indrindra any amin'ny faritra Eurasia ary iray amin'ireo foibe lehibe indrindra eto an-tany ho an'ny sehatry ny rafitry ny lalamby, no iray amin'ireo mpisehatra manan-danja indrindra amin'ny sehatry ny rafitry ny lalamby any amin'ny faritra eo anelanelan'ny 10-12 aprily 2019 [More ...]
Fiarabe fiara Wi-Fi natomboka tao Van
Van Metropolitan Munisipaly, tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka 90 mandeha amin'ny Internet (Wi-Fi) dia nanomboka. Manohy ny asa mifototra amin'ny teknolojia dia nanolotra serivisy vaovao ho an'ny olom-pirenena ny Kaominin'i Metropolitan. Sampana teknolojian'ny fampahalalana sy [More ...]
Vokatry ny fifandonan'ny fiaran-dalamby any ambanivohitra any Barcelona, ​​Espaina, olona 1 no maty nisy olona 100 naratra kely. Fiaran-dalamby roa no nifandona tany 57 kilaometatra avaratra andrefana. Tao amin'ny fiainan'ny olona iray no niseho ny loza [More ...]
Lalana hafa misy bus vaovao hafa no nampidirina tao Konya
Ny kaominina ao Konya Metropolitan, 11 Hatramin'ny alatsinainy, mifamatotra amin'ny Alakova Movement Center dia hiasa eo anelanelan'ny Alakova Quarter sy Alaaddin Boulevard 76 No. Karatepe Gaza Street dia hamoaka ny zotra fitaterana vaovao. Konya [More ...]
Ireo fiara fitaterana mitondra hafatra ara-tsosialy an'ny Park A. belonging. Tanànan'ny Kocaeli Metropolitan, Tale Kocaeli Provincial Security Directorate sy Kocaeli University dia nanao sonia tetik'asa andraikitra sosialy manan-danja. tetikasa [More ...]
Fiarandalamby maimaim-poana avy any Metropolitan To Nilufer
Ny fivondronan'i Bursa Metropolitan vao nanokatra ny faritra acre 7 teo akaikin'ny tranoben'ny Nilufer Municipality ary niasa maimaimpoana. [More ...]
Sarintsarin'ny sidina Zonguldak-Filyos Halve
Solombavambahoakan'ny Antoko Repoblikana Zonguldak sady mpikambana ao amin'ny Vaomiera SEE Deniz Yavuzyilmaz, 6 Desambra 2018 izay natao tamin'ny fivorian'ny Vaomiera Kit natao tamin'ny TCDD, Zonguldak - ny vidin'ny tapakila fiaran-dalamby Filyos fiaran-dalamby [More ...]
Istanbul Airport 3 187 An'arivony 553 no manidina ny mpandeha amin'ny volana
Tale jeneralin'ny Ivotoeram-piaramanidina airports (DHMI), 2019 tamin'ny volana Janoary ny fiaramanidina fiaramanidina, mpandeha ary antontan'isa momba ny entana. Raha arak'izany, tamin'ny Janoary faha 2019; Sidina fiaramanidina ary mandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina [More ...]
THY Expo Sosialy ao amin'ny 2019 Main Theme Industry 4.0
Ny tontolo izao No., Tiorka Airlines, Torkia siansa lehibe indrindra ao amin'ny Siansa fetin'ny Expo 2019 manomboka ny dingana fangatahana ho an'ny tetikasa fifaninanana. Ny lohahevitra lehibe amin'ny hetsika amin'ity taona ity dia ny 'Industry 4.0'. Ben'ny tanàna ao Bursa [More ...]
Mahita fiara ao Konya manome fahazoan-dalana mankany amin'ny mpamily
Ny fangatahana Bul Find Parking ”ao amin'ny fampiharana ny Konya Mobile Konya ao amin'ny Konya Metropolitan ao amin'ny Konya dia ahafahan'ny mpamily mahita ny ora fiasana sy ny taham-pahavitrihana ny toeram-piantsonan-dehibe eo afovoan-tanàna. Ho an'ny fiantsonana mampiasa ny endri-pandaharana [More ...]
Androany amin'ny tantara: 9 Febroary 1857 Constanta - Boğazköy ...
Androany ao amin'ny Tantara 9 Febroary 1857 Misy ny sitrapon'ny vondrona Britanika Constanta - Boğazköy (Chernovada).